Jiid Down Jikada Fuacet Burushka Nickel
Qarsooni darbi-jiif ah oo daboolan
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Jiid Hoosada Qasabadaha Jikada / WOWOW Jiid Hoos U Dhaji Qasabada Jumlada Nickel
WOWOW Jiid jikada jikada Nickled Nickled
Gacan bir ah oo hufan, la isku halleyn karo, oo badbaado leh hoos u jiida tuubada jikada.
Badbaadso waqti badan oo ku shaqee shaqada jikada, ha ahaato fayadhowr ama karinta.
Qubaysku wuxuu isticmaalaa qaybaha muhiimka ah ee la soo dejiyay si loo hubiyo tayada badeecada.
Qubayska jikada ee jikada loo yaqaan 'nickel' 2310201
Maxaad ugu dooranaysaa tubbada jikada nikkel ee naxaasta ah ee jikada jikada chrome? Hagaag, halkan uma joogno inaan ka wada hadalno dhadhanka. Dhadhaminta waa mid la soojeediyey oo dhadhamin kasta oo jirta waxaa jira xallin hanaan leh. Waxaan arki karnaa in dad badani ay weli doorbidayaan tubooyinka jikada ee chrom-ka ee ay ka baxaan tubooyinka nickel-ka loo cadayay. Si kastaba ha noqotee, tubooyinka jikada ee loo yaqaan 'nickel' tubooyinka jikada ayaa ku guuleysta caan caan sannad kasta. Maaha wax aan jirin, inta badan joornaalada naqshadaha guryaha ah ayaa inta badan soo bandhiga tuubooyinka jikada nikkeliska ee lagu qurxiyo naqshadaha jikadooda. Waxba kuma xirna haddii ay ku saabsan tahay naqshadaha caadiga ah ama naqshadaha jikada casriga ah. In kasta oo chrome siinayo taabasho iftiin leh oo kushiinka ah, tubada dareeraha jikada ee nikkeliska ah ayaa xaqiiqdii ah taabasho xarrago leh naqshad kasta oo jikada ah. Inta badan hoteellada xiddig ee shan-xiddiggu waxay leeyihiin tubooyinka macmalka ah ee loo yaqaan 'nickel tub', maadaama ay kaliya ku siiso qulqul qurux badan jikada. Alaabada yaryar sida tubooyinka jikada waxaad ku gaari kartaa saameyn aad u weyn sida aad arki karto.
Qubayska jikada ee jikada jikada ma aha sidaas darteed qaali sidoo kale marka loo barbar dhigo tubada jikada chrome? Khasab maaha. Gaar ahaan kuma xirna WOWOW. WOWOW waxay ku guuleysatay inay si habsami leh u adeegsato soo iibsigeeda. Iyo marka lagu daro goobaha waxsoosaarka otomaatiga u ah, WOWOW waxay awood u leedahay inay soo saarto qasabadaha jikada oo tayo sare leh qiime jaban, ha ahaato kuwo lagu sameeyay boomaatada loo yaqaan 'nickel burush' ama chrome. Waxaad ka heli doontaa faa'iidooyinka waayo-aragnimada ballaaran ee WOWOW ee soo saaridda tubooyinka jikada ee heer sare ah ee laga dalbaday adduunka oo dhan.
Naqshadeynta tubbada tubbada jikada ee naxaasta
Naqshadeeyayaasha geesinimada leh ee WOWOW marwalba waxay ku guuleystaan ​​inay keenaan naqshad kushiinka jikada oo si toos ah ugu habboon joornaalka naqshadaha gaar ah ee guryaha. Qolka jikada ee foornada jikada ee gaarka loo yaqaan 'nickel buluug' waxay bixisaa bilic qurxan, xarrago leh, aad u yar oo weli ku habboon dhammaan jikada. Naqshadeedu waa mid casri ah, laakiin waxay ku habboon tahay ku dhowaad jikada kasta. Dhammaan cabbiraadaha iyo saamiyada ayaa si wanaagsan looga fikiray oo aad ka muuqato natiijada dhamaadka qaybtaan farshaxanka jikada casriga ah.
Nambarka buluuga ah ee jikada loo yaqaan 'Nikcel bulled bagel' wuxuu siinayaa qurxin quruxsan, muuqaal qaas u ah jikadaada guud ahaan iyo gaar ahaan jikada jikada. Sababta oo ah waad wareegi kartaa tubada sare ee arcikada 360 digrii, tubada jikadaada ma jiri doonto marwalba. Waxaad si sahal ah ugu dhaqaaqi kartaa tubada sare ee bidix bidix ama bidix qaab aad si buuxda ugu heleyso weelka jikada.
Tubbada tubada jikada ee faraha badan oo loo yaqaan 'nickel'
Marka ugu horeysa ee hawo qubayska jikada ee WOWOW ee loo yaqaan 'nickel ብሩyo nickel' waxay bixisaa seddex shaqo oo biyo ah Marka la adeegsado qulqulka, buufinka ama hakinta habka waxaad u adeegsan kartaa qashin-qubka jikada jikada badan ee WOWOW biyo buuxinta, buufin si aad u biyo raaciso ama aad u joojiso si aad uga fogaato inuu ku daato. Qalabka-farsamada Neoperl ABS-koronto ayaa keydin kara ilaa 50% biyo ah, oo aad ku arki doontid biilkaaga biyaha. Taasina iyada oo aan laga tanaasulin waxqabadka durdurinta. Marka labaad, muuqaalka ugu weyn ee kushiinka jikada ee buluuga ah waa tuubada biyaha dib loo celin karo. Madaxa tuubada waad ka soo jiidi kartaa tuubada biyaha si aad u gaartid meel kasta oo ag taal gudaha jikada jikadaada. Markaad dhammaystirto shaqada nadiifintaada, madaxa buufinta ayaa si otomaatig ah ugu laaban doona meeshiisii ​​asalka ahayd.
Baalalka waxaa lagu qabsan karaa hal gacan, si had iyo jeer gacanta kale gacanta looga dhigo howlaha jikadaada. Biyo-qabeedka tubada jikada si hagaagsan ayuu u socdaa welina waad aragtaa agab tayo leh oo loo adeegsaday. Ma dareemi doontid wax dhabar xanuun ah sinaba. Heerkulka biyaha iyo xoogga biyaha labadaba si fudud ayaa loogu xakamayn karaa birta birta ah ee aan birta lahayn.
Qalabka tubada jikada oo tayo sare leh
Sidii horay loo sheegay, WOWOW kaliya waxay isticmaashaa qalab tayo sare leh si ay u soo saarto tubooyinka jikada. Falka korantada tusaale ahaan wuxuu ka samaysan yahay nickel burush iyo tubada jikada lafteeda waxay ka sameysan tahay bir aan la karin. Iyada oo ay weheliso dhismaha adag ee naxaasta ah, foornada bulukeetiga ee jikada ee WOWOW waxay ka hortageysaa xoqidda iyo burburka. Taasi waxay ka dhigeysaa tubbada jikada ee loo yaqaan 'nickel burush' tayo sare leh.
Tuubada biyaha fudud ee dib loo celin karo oo ah 1,5 mitir waxay ka kooban tahay silica gel. Sidaa daraadeed waa bilaash-la'aan waxayna dammaanad qaadaysaa hawlgallo hagaagsan inta ay ka soo laabaneyso tuubbada. Kubadda culus maadaama ay tahay miisaan culus, madaxa buufinku wuxuu helayaa iska caabin ku filan si uu kuugu siiyo raaxada ugu badan ee aad ku shaqeyneyso.
Tubada jikada oo ay ugu fiican tahay lacagta
Sababtoo ah naqshadeeda iyo tayada agabkeeda iyo dhammeystirkeeda, waxaad filan lahayd tuubada jikada in lagu qiimeeyo sida calaamadaha A-brand-ka adduunka oo caan ku ah suuqa. Laakiin wax aan ka yarayn run! Nambarka buluuga ah ee loo yaqaan 'nickel foffled nickel' waa mid aad loo awoodi karo oo xitaa jikada naqshadeynta miisaaniyadeed waxaad awood u lahaan kartaa tubada jikada sharafta leh ee ku siinaysa cimri dheeri cimri dheer xagga fulinta sare.
Caymiska shanta sano wuxuu quseeyaa badiyaa tubooyinka jikada ee WOWOW. WOWOW waxaan si aad ah kalsooni ugu qabnaa in foornada jikada ee loo yaqaan 'nickel tubob' nalkaaga ah ay qaban doonto ugu badnaan oo aan kuu horseedi doonin dhibaato. Haddii tubada buluuga buluuga ah ee loo yaqaan 'nickel brauza' aysan u shaqeyn karin sidii ay ahayd inay u qabato, waxaan si fudud u beddeli doonaa sheyga dhib la'aan. Waxaa lagugu hubin doonaa sii wadida tayada iyo waxqabadka marwalba.
Qubayska jikada ee foornada jikada loo isticmaalo
Nambarka buluuga ah ee jikada loo yaqaan 'nickel foffled nickel' wuxuu la yimaadaa Teknolojiyada Isku Xirka Degdega ah ee Creative. Sababta oo ah dhismaha isku xidhka asalka ah, way fududahay inaad adigu naftaada rakibto. Uma baahnid tuubbo tuug kaa qaali kara lacag badan. Qalabka lagu daro, tusaha rakibaadda iyo fiidiyowga fiidiyowga ee internetka, waxaad awood u yeelan kartaa inaad ku rakibto foornada bulukeetiga foornada ah 30 daqiiqo gudahood.
La yaab maahan, foornada bulukeetiga jikada ee WOWOW looma adeegsan karo guryaha oo keliya, laakiin ganacsiyo badan sida makhaayadaha iyo baararka sidoo kale waxay isticmaalaan tubada jikada. Sidii horeba loo sheegay, nambarka buluuga ah ee la cadaydo wuxuu siiyaa casriyeyn dhab ah jikada kasta. Oo ay weheliso waxqabadkeeda sare, waxay xaqiiqdii ku habboon tahay baararka iyo makhaayadaha, gaar ahaan kuwa leh jikada furan. Naqshaddan dharka buluuga ah ee buluuga ah ee loo yaqaan 'nickel ብሩyo buluug' waxay siisaa ku darista jikada kasta. Macaamiil badan oo ganacsi oo caalami ah ayaa sidaas darteed ku aaminay WOWOW qalabkeeda iyo qiimaha lacagta ay bixiso. Waxaan kalsooni ku qabnaa inaan gaarno kalsoonidaada sidoo kale!
Faa'iidooyinka tubbada tubada jikada ee loo yaqaan 'nickel' ayaa loo cadayay si kooban:
Waxay siiyaan jikada walxo-kijo ah
Design Qaab qaanso sare oo qurux badan
Steel Qalabka birta adag iyo naxaas ahaanta adag
Mod 3 hababka biyaha
Ho Tuubada biyaha soo jiidi karo
Fudud oo lagu rakibi karo Teknolojiyada Isku-xirnaanta Degdegga ah ee Hal abuurka leh
Way fududahay in la nadiifiyo oo ay fududaato in la daryeelo
Warranty 5 sano oo damaanad ah
SKU: 2310201 Categories: Qubeyska jikada, Jiid Hoosada Qasabadaha Jikada Tags: Nickel caday, Hal Hole, Buufiyo
55 x 28 x 7 cm; 2.58 kiilo garaam
Nikliil caday 700
Qasabada jikada / qasabada saxanka jikada oo leh buufiye hoos u dhiga
Zinc daawaha / ahama steel / naxaas
Hal-dalool & 3 godad; Deck-Mount
Arc Sare / Gooseneck
1-Hole ama 3-Hole oo leh 8 inch Cover Cover Cover
Saddex qaab: Stream / Buufin / Hakad
Ballaca ka baxsan
Bidix ama sax ah
Mashiinka qasabada / Seddex shaqooyinka xakamaynta biyaha
tilmaamaha gaarka ah
Hoos u dhig buufinta
Waxyaabaha Ay Ka Mid Yihiin
1x WOWOW Kushiinka qasabada (50cm Hooska & Biyaha Qabow Hoos, 1.5m Cadaadis Cadaadis Adkaysi u leh PEX Hose), Gargaarka: Rubber, Gasket, Nut, 1x Manual Manual, 1x Weight, 1x 8 inch Deck Plate
WOWOW Matte Black jikada Isku-dhafka Madfaca
La iibiyey: 53
WOWOW Matte Black Pull-Down Spray jikada Faucet
La iibiyey: 35
La iibiyey: 64
WOWOW Laba Gacan-Weel oo Kushiin Kusoo Wajahan Dhinac ...
La iibiyey: 26
Dammaanad dheeraad ah oo 6-bilood ah